Shariif Xasan oo la ogaaday in Musharaxnimadiisa Madaxweyne ay tahay mid siyaasadeed Warbixintii labo Afle !! | kowtharmedia.com
Home WARAR Shariif Xasan oo la ogaaday in Musharaxnimadiisa Madaxweyne ay tahay mid siyaasadeed Warbixintii labo Afle !!
Shariif Xasan oo la ogaaday in Musharaxnimadiisa Madaxweyne ay tahay mid siyaasadeed Warbixintii labo Afle !!
Dec 05, 2016WARAR
Shariif Xasan oo dhowaan ay u ansixiyeen Xildhibaanada Koofur Galbeed inuu isu sharaxi karo xilka Madaxweynaha ayaa warar hoose waxay sheegayaan in Musharaxnimadiisa ay tahay mid siyaasadeed oo qorshayaal labo afle ah uu ku damacsan yahay.
Shariifka oo horay xildhibaanada Digil iyo Mirifle ka dhaadhiciyay in wixii markaan ka dambeeya beeshiisa qaadan doonin Guddoomiye Baarlamaan, wax aan Madaxweyne aheyna u cuntami doonin, hase ahaatee ay taasi tahay mid aan waxba ka jirin.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in Shariif Xasan musharaxnimadiisa inay tahay mid jiliin ah oo uu ku doonayo inuu gorgortan ka sameeyo xilka guddoomiyaha baarlamaan loona gacan geliyo siyaasiyiin jeebka ugu jira oo u diyaarsan.
Sidoo kale waxaa soo baxaya in Shariifka uu diyaarsaday siyaasiyiin ay saaxiibo dhow yihiin, kuwaasi oo uu la damacsan yahay inay qabtaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana siyaasiyiintaasi ka mid ah Maxamed Mursal Sheekh, oo ah wasiirka macdan iyo biyaha, horayna u soo noqday safiirka Soomaaliya ee Turkiga, wuxuuna u dhashay beesha Luwaay, Shariif Maxamed Cabdullaahi oo beesha Asharaaf ka soo jeeda, Xuseen Badni iyo Ibraahim Yarow Isaaq oo ka tirsan xildhibaanada hadda lasoo doortay.
Dhinaca kale Shariif Xasan ayaa ku soo hungoobay socdaalkii uu ku tegay magaalada Addis Ababa, isagoo dowladda Itoobiya u gudbiyay musharaxnimadiisa iyo siyaasaddaha qarsoon ee uu ka damacsan yahay doorashada la sugayo
toobiya ayaa u deyrisay, waxayna u sheegtay in xiligaan aysan taageereynin musharaxnimadiisa waxayna u sheegtay in beesha Digil iyo Mirifle Madaxweyne noqon doonin xiligaan.
Maalinta Tallaadada soo socoto ayuu isugu yeeray Shariif Xasan dhamaan 77 xildhibaan ee labada aqal kasoo galay Koonfur Galbeed, wuxuuna shirka uu isugu yeeray oo ka dhici doona Baydhabo damacsan yahay in uu ka dhaadhiciyo qorshahiisa siyaasadeed ee huwan laba afleynta in Madaxweyne aanay heli doonin, balse ay sii xajistaan xilka Guddoomiye Baarlamaan.
Siyaasadda Shariif Xasan oo lagu tilmaamo inay tahay mid macaash raadis ah, ayaa wuxuu gorgortan kula geli doonaa musharaxii uu u arko inuu natiijo ka keenayo doorashada madaxweyne, waxaana qorshahiisa qarsoon ee uu ku doonayo inuu afartaas xubnood ee uu wato ku bixin doonaa juhdi iyo dadaal badan sidii ay u noqon lahaayeen Guddoomiyaha baarlamaanka.
Previous PostDaawo Sawirro: Sida quruxda badan ee Madaxweyne Xasan loogu soo dhoweeyey Magaalada Kismaayo!! Next PostMUUQAAL: Dowlada Ingariiska oo fadeexad haleeshay kadib markii dhaqaalo loogu tala galay Dowlada Soomaaliya ay Gacanta ugaliyeen Hey´ado Shabaab la shaqeya!!